नबिल बैंक ७ वटै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ - Aathikbazarnews.com नबिल बैंक ७ वटै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ -
नबिल बैंक ७ वटै प्रदेशमा पुर्याउने योजना छ
शुक्रबार, पुस १३, २०७५
रातारात नबिल बैंक आउनु भयो कथा के हो ?
३३ वर्ष पुरानो नबिल बैंकले आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाइसकेको छ । अरू बैंकमा जस्तै नबिलमा पनि कार्यकारी पदमा नयाँ व्यक्ति आउँदा अलिअलि परिर्वतन त भइहाल्छ नै । तर एउटा बाटो समातिसकेको संस्थाको पहिचानलाई नै निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नबिल, एउटा यस्तो बैंक हो जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पुर्याउन एक रुपैयाँ पनि लगानी थप्नुपरेको छैन । बैंकले पुँजी बढाउन न एफपीओ जारी गर्नुपर्यो न त मर्जर वा एक्वायरमा जानुपर्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नबिल आफैंमा सक्षम बैंक हो । हाम्रो अबको सोच सेवाग्राहीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ । जसको अर्थ सेवाग्राहीको पनि आर्थिक उन्नति होस् र बैंकले पनि अझै प्रगति गरोस् । यो कुरा बनाउने मेरो कुरा छ । म कसरी आएँ, किन आएँ, यो सबैले बुझ्नु भएकै छ नि ।
अब नबिल बैंकमा कस्तो परिर्वतन ल्याउने योजना छ ?
एक हिसाबले हेर्दा ४ वर्षे कार्यकाल लामो हो । तर, बैंकको सेवासुविधा जुन हिसाबले विस्तार गर्न सकिने ठाउँ छ, त्यसलाई मनन गर्दा ४ वर्षे कार्यकाल छोटो पनि हुनसक्छ । म आवश्यकता हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छु । हाम्रो देशमा विदेशी लगानी भएका बैंकहरू पर्याप्त छन् । तिनमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, बेलायती लगानी छ । मैले अहिलेसम्म नेपाली बैंकले विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको देखेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा यो काम नबिलले नगरे कसले गर्छ ? नबिल बैंकले विदेशमा शाखा खोलेर हुन्छ कि विदेशी बैंक नै किनेर वा साझेदारीमा, जसरी हुन्छ विदेशी पैसा नेपाल भित्र्याउने योजना छ । नबिलले अहिले जुन किसिमले प्रविधिको प्रयोग गरेको छ ।
यो अवस्थासम्म आइपुग्न अन्य बैंकलाई अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । जुन प्रविधिहरू नबिलले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसलाई अझैसम्म हामीले बजारमा प्रचार गरेका छैनौं । आउँदो दिनमा यी प्रविधिको पूर्ण रूपले प्रचार गर्ने मेरो योजना छ । सात वटा प्रदेशमा नबिल पुर्याउने मेरो योजना छ ।
नबिललाई पाको बैंकको रूपमा हेरिने गरिन्छ । युग सुहाउँदो परिर्वतन गरेर यो बैंक युवादेखि वृद्ध–वृद्धासम्मको हो भन्ने भावना विकास गर्नुछ । जसको लागि हरेक उमेर समूहलाई सहज हुने तरिकाले सेवासुविधा विस्तार गर्ने योजना छ ।
हामी नियामक निकायसँग पनि सहकार्य गरेर आगाडि बढ्ने सोचमा छौं । जसको लक्ष्य उत्कृष्ट नियमपालक बैंकको रूपमा नबिललाई सबैले विश्वास गरोस् भन्ने हो । हामी देशव्यापी शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर अझै फैलिने सोचमा छौं । गाउँ पुगेर नबिलले बैंकिङ सेवा मात्रै विस्तार गर्यो भन्ने होइन कि यसले हाम्रो दुःख पीडामा पनि साथ दिन्छ भन्ने आभास सबैलाई गराउन चाहन्छौं ।
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगमा बैंक जान मानेन भनिरहेको छ नि ?
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्दछ र त्यही अनुसार शाखा विस्तार पनि गर्दै आएका छौं ।
तर कतिपय स्थानमा पूर्वाधार अभावको कारण सरकार आफैं पुग्न सकेको छैन । यस्तो ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी पुग्न सक्छ ? सरकारी निकायसँग छलफल गर्दा विकासको पूर्वाधार नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था जसरी पनि जानुपर्छ भन्छन् । तर बैंकलाई कुनै समस्या आयो भने आफू जिम्मेवारी लिन्छु भन्दैनन् ।
भोलि केही भइहाल्यो भने आखिर फस्ने त सर्वसाधारणको पैसा हो । त्यसैले हामी लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउन चाहन्नौं । यसो भन्दै हामी पन्छिन पनि खोजिरहेका छैनौं । म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा राष्ट्र बैंकको एक पटकको अनुरोधमा हामीले २४४ वटा शाखा विस्तार गरेका थियौं । सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्छ भने हामी जस्तोसुकै दुर्गममा गएर पनि सेवा दिन तयार छौं ।
स्थापनाकालदेखि मेगा बैंकमा हुनुहुन्थ्यो, अचानक किन छोड्नुभयो ?
म सधैं नियामकलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हो । नियामक निकायको व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति दुई कार्यकाल बढी एउटै बैंकको सीइओ बन्न पाउँदैन । यो नियमको पालना गर्दै बाहिरिएको हुँ । ८ वर्षअघि म नबिल जस्तो स्थापित संस्था छाडेर सञ्चालन अनुमतिसमेत नआइसकेको संस्थामा जाँदै थिएँ ।
त्यतिबेला धेरैले मलाई यति ठूलो जोखिम किन लिएको भन्थे । तर टिम राम्रो भयो भने जुनै पनि संस्थालाई उचाइमा पुर्याउन सक्छु भन्ने ममा विश्वास थियो ।
राष्ट्र बैंकले ‘कुलिङ पिरियड’ तपार्इंलाई नै लक्षित गरेर ल्यायो भन्ने चर्चा त्यस बेला बजारमा आयो यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मलाई लाग्दैन, अनिल शाह एउटा त्यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति हो, जसको पछि राष्ट्र बैंक लाग्छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउनको लागि उक्त नियम ल्याएको हो । यो नियम लागू हुनु र म नबिल आउनु संयोग मात्र हो । नियामकले नियम ल्याइसकेपछि पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो । यसैबीच राष्ट्र बैंकसँगै यसबारेमा सल्लाह गर्दा उहाँहरूबाट डेपुटीका रूपमा जान मिल्ने सुझाव आयो । जसले गर्दा डेपुटी सीइओका रूपमा नबिलमा आएको हुँ । अरू केही होइन ।
सीइओ भएर लामो समयसम्म काम गर्नुभएकै संस्थामा ‘डेपुटी’ का रूपमा प्रतिष्ठा घटाउनुभयो भन्ने हल्ला बजारमा छ नि ?
मलाई काम गर्न कुनै पद नै चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन । जुन पदमा भए पनि आफूले राम्रो गरेर देखाउने हो । नबिलको ‘ब्रान्ड भ्यालु’ मैले बुझेको छु । यसको ‘ब्रान्डिङ’लाई अझ बढी विस्तार गर्न सकेँ भने पद होइन म व्यक्ति माथि पुग्छु । त्यसैले पदलाई होइन कामलाई विश्वास गर्छु ।
नबिलमा केही राम्रो गर्न सक्छु भन्ने हेतुले नै आएको हुँ । यहाँको टिमप्रति म पूर्ण विश्वस्त छु । म एक्लैले भन्दा पनि संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूरै टिम नै सक्षम हुनुपर्छ र त्यो नबिल बैंकमा छ । जुन कुरा मैले यो टिमसँग ६ वर्ष काम गर्दा बुझिसकेको छु ।
अहिले तरलता अभावले ब्याजदर अस्तव्यस्त भएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भएको छ । यसको समाधानका लागि बैंकरहरूले नियामक निकायसँग आग्रह गरेका थियौं ।
हामीले मागे जस्तो तरलता सहजताका लागि ठ्याक्कै केही ठोस कदम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा अवधिमा ल्याएको छैन । तर, यसको समाधानका लागि हामी जस्ता वित्तीय संस्था स्वयं लाग्नुपर्दछ । अहिले बजारको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धि उच्च छ । राजतिलक साप्ताहिक
सहकारीले अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाउने !
समृद्धि फाइनान्सको विजनेस डेभ्लपमेन्ट वर्कशप सम्पन्न
गुडविल फाइनान्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा माथेमा नियुक्त
समृद्धि फाइनान्सले ल्यायो अब अनलाइनबाट खाता खोल्न सकिने सुविधा
देउखुरी सहकारीमा ५ करोड हिनामिनामा गाउँपालिका अध्यक्षसहित २५ जनाविरूद्ध मुद्दा
सिन्धु विकास बैंकको नयाँ शाखा सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु बजारमा
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको छानबिन फाइल मन्त्रीपरिषदमा
कास्कीको लेखनाथमा प्राइमलाइफ इन्स्योरेन्सको उपशाखा
२७ वाणिज्य बैंकः सबैभन्दा कम निक्षेप संकलन गर्नेको पहिलो नम्बरमा नेपाल बंगलादेश बैंक, अन्य कसको कति ?
अर्थमन्त्री शर्मा हुँ भन्दै करोडौं ठगि गर्ने पेसेवार ठग प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदर नबढाउने सहमति
महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा कोटेश्वरमा
प्राइम कमर्शियल बैंकले माग्यो ऋणपत्र निष्काशन अनुमति, १० प्रतिशत ब्याज
कुमारी बैंकका ५ शाखाहरुको ई–उद्घाटन